အိန္ဒိယ “လတ်မာ” Lathmar အကြိုသင်္ကြန်မှာရိုက်ကြနှက်ကြတယ် Holi Festival | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Community & Society » အိန္ဒိယ “လတ်မာ” Lathmar အကြိုသင်္ကြန်မှာရိုက်ကြနှက်ကြတယ် Holi Festival	9
Posted by Kyaemon on Mar 23, 2015 in Community & Society, Cultures, Education, Entertainment, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |9comments
——– လမ်းကြိုလမ်းကြားမှာလဲဝိုင်းရိုက်ကြတယ် အမျိုးသ္မီးတွေအုပ်စုလိုက်ချီတက်လာ
မျက်နှာကိုဖုံးပြီး ရွာထိပ်မှာ အသင့်ပြင် ကင်းစောင့်
———– အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင် တပ်မှူးဒေါ်ဝတုတ်ကြီး နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်
အမလေးဗျ ရိုက်ခံရတော့မဲ့အကြားမှာ ပြောင်ပြောင်ချော်ချော်နဲ့
နှောတ် လိုက်သေး ———
သနားပါတယ် မလုပ်ကြပါနဲ့ လို့ပြန်ဖြေပေးတဲ့
ရှေ့ရော နောက်ရော နာနာနှက်ကြတယ်
ရီတာပေါ့ ရီတာပေါ့ ထပ်တခါရိုက်ခံချင်လို့ဘဲ
ဟဲဟဲ မနာပါဘူး ————
ရွာပြင်ကလဲ ခဲရာခဲဆစ် ကြံဖန်ပြီးလာကြတယ်၊
ဆိုက်ကားသမားခမြာ မသက်သာ၊ ဆင်းသွန်းရ
ဗုံတီး အရောင်မှုန့်တွေလိုက်ကြဲ ——–
ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ Lord Krishna ကရီစ္စနာကိုယ်တော်အရှင်မြတ် က မိမိရဲ့နေရပ်
နန္ဒဂွန်ရွာ Nandgaon ကနေ သူရဲ့အချစ်တော် Radha ရဒါ ရဲ့ နေရပ် Barsanaဘာစနာရွာ ဆီကို
ကြွရောက်ပြီး ကြည်စားနောက်ပြောင်တာကို ရဒါ နဲ့အပေါင်းပါရွာသူတွေက
နန္ဒဂွန် ရွာသားတွေက ဘာစနာ ရွာကိုနှစ်စဉ်သွားရောက်နောက်ပြောင်
ကြည်စားကြကာ ဘာစနာ ရွာသူတို့ကလဲဒုတ်တွေနဲ့မောင်းထုက်
(ဟန်ပြ)ရိုက်နှက်ကြပြန်တဲ့ ဓလေ့အစဉ်အလာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်၊
March 5, 2012Lathmar Holi festival Traditionallyarite that celebrates the coming of spring, Holi is marked by joyous participants throwing colored water and powder. In northern Uttar Pradesh, “Lathmar Holi” is celebrated before Holi itself, and while it isarite of spring there as well, the festival also features another layer of fun rooted in Hindu mythology. Lord Krishna is said to have visited the village of Barsana to tease his consort Radha. Women in the town responded by chasing him away. Today women from Barsana “beat” the men from Krishna’s village of Nandgaon with sticks for singing provocative songs and throwing colored powder on them. This year Holi itself will be celebrated throughout India and in other places on March 8. — Lane Turner (22 photos total)
naywoon ni says: သူ့အရပ်​ သူ့ဇာတ်​နဲ့ သူ့ဓ​လေ့ သူ့ထုံးစံ တစ်​ခု​တော့​တွေးမိရင်းပြုံးမိ
ဗမာ​တွေဟာ ဟိန္ဒူ​တွေဆီက ​ရေပက်​ ကစားတဲ့ သင်္ကြန်​ကိုပဲ ယူခဲ့လို့ ဒိလို မျိုးကိုသာ ယဉ်​​ကျေးမှု အဖြစ်​ယူခဲ့မယ်​ဆိုရင်​
ဟမ်​မ​ရေး ” နရသီဟပ​တေ့ ” လား အဲ့ဒိဘုရင်​ကို ​ကျေးဇူးတင်​ရမလို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: တကျောင်းတဂါထာဆိုပေမဲ့
Wow says: တပျော်တပါးကြီး ဆော်ဂျတီးဂျ …
Mike says: .ကြည့်ရတာတော့ပျော်စရာကြီးပါ
Shwe Ei says: -မြင်ရသလောက်တော့..လူတွေအားလုံးပျော်နေကြတာဘဲ..
-ရန်ပွဲမရှိတဲ့ ပွဲတော်ဆိုရင်..ပိုလို့တောင် ပျော်စရာကောင်းအုံးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ထီးချိုင်ဖက်တော့
ကာလသမီးတွေ ဖမ်း ရေထဲပစ်ချ။
Alinsett@Maung Thura says: သူတို့ အခုလို ရိုးရာပွဲလုပ်တာ ကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ အံ့သြကြတယ်..
သူတို့ကိုလည်း ပြန် အံ့သြစေချင်လိုက်တာ…
.ကျောင်းသားတွေကို ရဲတွေ ဝိုင်းရိုက်တာလေး…သူတို့ကို ပြန်.ပြချင်လိုက်တာ…
Ma Ma says: စိတ်ကိုထွက်ပေါက်ပေးလိုက်တာ။
ဆေးရောင်စုံတွေနဲ့ ပက်ကြ စကြတာ ဒီက ဟိန္ဒူ တွေလုပ်တာ တွေ့ဖူးတယ်။
ပျော်ပျော်ပါးပါး ရိုက်ကြနှက်ကြတဲ့ပွဲဆိုတော့ ထူးတော့ထူးဆန်းသား။
ကြည့်ရတာ ခံရသူလည်း နာမယ်မထင်ပါဘူး။
Lay Pai says: အသစ် အသစ် ဗဟုသုတတွေ ရ လို့ ကျေးဇူးပါ။